I-OnePlus 6T iya kuphehlelela ngombala omfusa | I-Androidsis
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo I-OnePlus 6T yaziswa ngokusemthethweni, njengoko sele siqokelele kweli nqaku ngazo zonke iinkcukacha zakho. Isiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina sishiye ezinye izinto ezinqabileyo, ezinje ngeminwe yeminwe edityaniswe kwiscreen. Imodeli ebizwa ngokuba ithengise kakuhle kakhulu ekwindla kwintengiso yamanye amazwe. Imodeli eza ngemibala emibini.
Kwintetho yakhe sele kwabhengezwa ukuba le OnePlus 6T izakufumaneka ngee-shades ezimbini, eMidnight Black kunye neMirror Black, Zombini zimnyama, nangona zigqibe ngokungafaniyo. Kodwa kubonakala ngathi ifemu ilungiselele umbala omtsha wokuphela okuphezulu, oza kuthi kungekudala ufike kwimarike.
Umbala omtsha esele uwalungiselele uphawu sele ukhutshiwe kwi-intanethi, kunye neposta ebhengeza olu hlobo lwesixhobo. Yintoni ebangela ukuba ucinge njalo akufuneki ithathe ixesha elide ukuba ikhutshwe ezivenkileni, mhlawumbi emva kokuba ingxelo eqhelekileyo ifike ngokusemthethweni. Nguwuphi umbala?
Kubonakala ngathi le OnePlus 6T iyakufika nemfusa kwintengiso. Ithoni uphawu olubiza ngokuba yiTurnder Purple, kwaye sinokubona efotweni. Umthunzi phakathi kwepinki nemfusa, ebonakala ngathi ineziphumo ezithile ezonakeleyo. Ke iyacelwa njengenketho yembala eyahlukileyo kolu luhlu luphezulu.
Uhlobo lwayo buqinisekisile ubukho balo mbala kwi-OnePlus 6T. Ibikho kwiwebhusayithi yohlobo lwesiTshayina apho ibonakele khona oko kuphuma kumandla okugcina uguqulelo lwefowuni ngalo mbala. Ingabhengezwa kungekudala, ukuba sele ivuza.
Ngoko ke, Siyathemba ukwazi okungakumbi malunga nokuqaliswa kwale OnePlus 6T emfusa kwintengiso. Ithoni eyahlukileyo, uninzi olunokuyithanda ngokuqinisekileyo. Ucinga ntoni ngalo mbala wokugqibela?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » I-OnePlus 6T iyeza kungekudala ngombala omtsha
Iindlela zokubiza ifowuni yakho ye-Android ngokukhawuleza
Iingcebiso zokucoca ifowuni yakho ye-Android ngeyona ndlela ilungileyo